Dacaayadooyin - Page 3 - News - Wararka - Somali Forum - Somalia Online
By lol, May 30, 2005 in News - Wararka
^^^^^^^^^ loooooooooooool@ Dhabay.....looooooooool.... hada soomalida badankeed dhabida waxey u yaqaanaan mida kale.. oo aanan aheyn dilmada...xitaa qaarbadan oo reer xamar ah aad arkeysaa. Loooooooooooooool.. but that was a good one...
LooooooooooooooooL waraa waa waalateen intaa ani idinka maqnaa yaah..lol..anina maana koobiye aan jiray oo xoogaa recovery aa la igu soo sameynaaye, idinkana waa sii taraaraxdeen..loool..
Maskiin, caadi ma tihid walaahi...
Check waraa adi is ilaali nooh reer xamar yahoo!!
Hibo dhaboo ani waxaan u aqaan diliska."aaa shafkaa i dhaway" markuu reer xamar asli ah ku dhaho "waa ku dhabaa walaahi" = waa kudilaa walaahi....
"waakudhabaa walaahi, waa oynee walaahi, ilka jajab macaldigir"..lol..mee aheed horta?..lol
-Oday reer dhagaxbuur ah ayaa hadda ka hor la su'aalay oo la yidhi ee adeer wali xaaskaaga ma dhunkatay?
-Odaygii oo amakaagsan oo dhabanada haysta ayaa yidhi agaah oo adeer ma musxaf quraan ahaa kolkaan dhunakanayo.
^^Sida aan wada ogsoonnahay Soomaaliya waxaa jira rag gaari-gacanno alaabaha dadka ugu qaado badanaana jooga baqaarada ama istoorada waawayn ee alaabaha lagu ii biiyo.
Maalin maalmaha ka mida ah ayaa waxaa isla joogay shan nin oo ah kuwa gaari gacannada ku shaqeysta, shantii afar ka mid ah ayaa waxay yiraahdeen waanu soo quraacanneynaa, afartii maahee midkii shanaad ayaa yiri waa tahay anigaa sii joogaya ee idinku baxa. Afartii ayaa is raacay oo doontay quraac, quraacdana waad taqaanaan waa Muufo iyo lafa baroodo oo lagu qasay ama lagu jajabiyay moos saliid macsarona lagu daray. Markii ay soo quraacdeeyn ayay soo laabteen, ayagoo soo socda oo soo yoognaya wadada ayaa gaari aad xawaarihiisa u sareeya ayaa ku yimid markaas suu jiiray mid ka mid ahaa afartii nin, kii markii horrayba ka haray ayaa yiri war haba dhintee halka badar uu qasaariyay ayaa iiga daran.
Anigugana aan labadeyda taano tuurto...
Nin reer waqooyi ah ayaa xamar yimid, wuxuuna kusoo degey motel yar oo raqiis ah..2ba cisho kadib markii uu qaraabo-diisii heley ayuu ka baxey motelkii(subaxdii uu baxey).
Roob badan ayaa xamar ka da'ayey oo xagaayadii aa lagu jirey..nasiib daro daladii uu watey ayuu motelkii ku ilaawey..galab nimadii ayuu ku noqdey motelkii si uu daladii usoo qaato....
Qolkii uu gal is yiriba maa hee, wuxuu maqley hadal(nin iyo naag)..
Ninkii : Dibkaan yaa iska leh
Naagtii : Anigaa iska leh
Ninkii : rujubeetadaan yaa iska leh
NInkii : mateekadaan yaa iska leh
Naagtii : xabad kaan yaa iska leh
ninkii : Anigaa iska leh
xariifkii(reer waqooyigii) wax uu dhageystaba, wuxuu is yiri alaabtii qolka taaley laka boob..wuxuu qaylo ku yiri
Ninkii reer waqooyiga ahaa :: War waxaad doontaan kala lahaadoo, marka dalaayada la gaadho anigaa iska leh..
Simply the best...mateekadaan yaa iska leh kulahaa Waar waxaad doontaan kala lahaadoo dalada waa anniga...kix kix kix.
Nin reer waqooyi ah oo qaadireysan oo aan sadex casho indhaha isa saarin suu u qayilaayey lee baa qof xoogan oo Kenyan Bantu ah ku qabtay. Motelkiisuuba geystay. Addigu wax baa kala gaaray Subaxii markii waagu baryey baa ninkii musqusha/suuliga/xamaamka u kacay mise sariirta waxaa la jiifa ruux murqaha iyo madaxa xiiraan iyo shiirka...oo hadana tshirt iyo pants baa dhulka yaala.
War ninkaaga kan maxaad ruumkeyga ka qabanaysaa miizi baa tahay...sxbkaa maneenu bilaabay. Qoftii waa iska tagtay. Issgaii waxay la noqotay in uu xalay nin la seexday...aduunkiibaa ku yaraaday. Kaaga daranne motelka waa Somali miiran. Ninkii waa cararay oo Buuhoodluu ka dagay issgaoo aaminsan in uu nin ay isla seexdeen.
Subaxii danbe issagoo biibito fadhiya ayuu waxa uu maqlay hebel baa Nairobi ka yimid. Ninkii maqaayada lahaa buu u soo dhawaaday oo waxuu si hoose u yiri:
Sxbkaa: War ma run baa hebel Nairobi buu ka yimid?
Sxbkaa: Maxuu ka sheegay Nairobi.
Ownerkii: ma wareysan..wax cusubse ma maqal.
Sxbkaa: War ninku ma lahaa nin baa nin la seexaday
^^^^qix qix qix qix
waraa reer mudug iska dhaafa:
Mid joogtay baadiyaha mudug baa xamar qabatay. Bilo ka bacdi bay baadihii ku soo laabatay (iyadoo reer magaal ah).
Maalintii ay soo laabatay baa lagu yiri naa hasoo jeedini bal cadays/caano shaaha noogu soo lis.
Qoftii intay Orgi u dhaw soo qabtay oo xiniinyaha dhuujisay bay tiri "Hooyo Kan Maraxaan Ma Dhiiqaayo Nooh".
sooma, lool this must be the best joke i have ever seen nowadayz
viva reer mudug
Haye ,, aniguna waa i kanaa !!!!!!!!
Nin reer waqooyi ahaa ayaa xanuunsaday ,, ka dib waxa la dhigay cusbitaalka si loogu daaweeyo ,,,, dhowr maalmood markuuu yaalay ayaa habeenkii dambe ninkii qolka uu jiifo geeska u xigay uu dhintay ,,,, habeenkii labaadna kii ku xigay ,,, habeenkii sadexaadna kii ku sii xigay oo markaa ahaa kii isaga ugu soo xigay ,,, subaxnimadii ayuu ninkii inta uu gogoshiisii qaatay orday oo cusbitaalkii ka baxsaday isaga oo leh "hadii aan jiifo aniguna caawa ayaan dhimanayaa" ,,, markii uu hal habeen maqnaa ayuu subixii labaad soo noqday si uu u hubsado xaalada ,,,,, waxa uu arkay kii isaga dhinaca kele ka xigay oo dhintay ,,,,,
inta uu madaxa qabsaday oo uu qayliyay buu yiri:
" Maxaan idiin sheegayay ,, malagii baa yimid si uu nafta iiga qaado ,,, markii uu meeshii iga waayay buu kii dhinaca kele iga xigay ka qaaday"
A stunned reaction from a REER XAMAR Dude who saw his newly wed Fara Dheer wife for the first time.[best read in the Reer Xamarest dialect you can ever try]. I apologise for the poor somali.
Jeylaani: Haaaaaaaaayyyyy!!! Maxaawaye Xalima,!! Wajigaa iyo Cajirkaaa maisku ekeee.
Xalima: War Maxaad Ka wadaa?
Jeylaani: Wajigaa Waas Cadyahay,Cajirkaa waas Madowyahay!!
bal anna aan mid ku daro...
nin reer waqooji ah aa wuxuu u soo socday xamar, xaaji qamsiin oo meel kasoo raacay, waxaana fuulo igaarkoo oo reer xamar ah. jid xun oo jajaban baa lasoo maraayay oo markuu baabuurka jagjag dhaho dadka waa isku dhacaayeen. baaburki baa meeshi soo maray, wiilkii reer xamarka ahaay wuxuu ag fadhiyay reer waqooyigi oo wuxuu ku yiri 'exkuusno' (waa talyaani meaning excuse me), ay reer waqooyi waa iskuusay, yacni wiilka ha caaririnin oo is dhahay.
hadanana sidi oo kale aa qabsatay ... maanta dhan reer xamarki wuxuu ka bixi waayay 'exkuusno'..maskiin reer waqooyi tacbaan oo noqday oo soo isku kuusaayay nafta aa ka bixi rabtay....marki dambe reer waqooyigi wuxuu 'walaalo dee gaariga mar dhaw ka dhici...bal halkee baan u sikadaa'. reer xam arkina polite nimo oo'ba dhameeyay soo maantoo dhan uugu haayay 'exkuusno'
Yaa Baarqab yaqaan? macallin reer Hargeysaad ah oo suugaanta Xamar ka dhigi jirey baa arday reer Xamar u badan weydiiyey!
Laa, Baarqab geela iskaabulada lee maahanow!
Nin ka tagay America oo xamar aaday ayaa wuxuu rabay in uu moodo Isbaaro u xirin Wadaad Habar (jidir) ah
Ninkii: Meeqo ayaa lagu moodaa meeshaan?
Wadaadkii: Labaatan kun oo shilin
Ninkii jeebkiisa u gacnta giliyey, lacag badan oo kuus ah oo isku xiran uu siiyey wadaadkii, wuuna sii gudbay.
Soo noqodkii asagoo meesha soo maraayo ayaa wadaadkii kasoo dabo oray oo wuxuu yiri
Meesha waxaa lagu gudbaa labaatan kun bas, adiga afartan kun ayaa isiisay, walaaloow lacag xaaraan ah marobo ee iga hoo labaatankaan.
Ina cali fanax yiri: War heedhe.. maanta waxaan u maleynayaa in Kii alle ahaa uu hurdoo.. malaa'igyashii qasabadahii ku ciyaaraayaan"
loooooooooooooool. Inaa lilaahi wa inaa Ilayhii raajicuun, funny but sad indeed,not that it's true,but funny.
Here is mind,
Maalin maalmaha ka mid ayaa waxaa isa soo raacay dayday ah(militia) . Gaadhi ayey la socdeen, gaadhigana kawadaa wuu cabsanaa, jaad iyo khamri ayuu kasoo dhargay, marka uu dhexda marayo ayuu yidhi
Ninkii darawalka ah: waryaadhaheen
Ragii kale: Hee
Darawal: horta yaa ina wada?
Ragii kale: dee Ilaahay.
Darawalkii: dee ha idin wado wakaase (inta uu gaadhigii sii daayey, oo jar ka tuuray)halkii ayaa ragii oo dhan lagu waayey.